Fomba hafahafa :: Vehivavy roa matin’ny tangena fa voatondro ho mpamosavy • AoRaha
Maty teo no ho eo ireo vehivavy roa voatondro ho mpamosavy rehefa avy nampisotroina tangena, tany Ambodihasina-Vavatenina, tamin’ny alarobia 18 septambra lasa teo. Niezaka nanamarin-tena teo anatrehan’ireo olona manodidina ny dimanjato sy roa arivo vory tany anaty ala iray izy roa vavy ireo ka nisotro tangena teo imason’ny tangalamena, lefitry ny lehiben’ny fokontany sy mpimasy iray.
Fomba antsoina hoe « Fampinomana » ity fampisotroina tangena ity any amin’ny faritra Analanjirofo. Nisy lehilahy iray nitaraina fa nampijalian’ny mpamosavy tamin’ny volana aogositra teo, tany an-toerana. Nanonona anaram-behivavy telo sy lehilahy iray izy, noampangaina ho nahavanon-doza. Tezitra ny havan’ireo vehivavy ireo ka nitory noho ny antony fanalam-baràka nataon’io lehilahy io. Nametraka fitoriana ihany koa ilay lehilahy taorian’izay.
Nanao fanadihadiana lalina momba ity tranga ity ireo zandary any Vavatenina saingy tsy nahita porofo na olona nilaza ho vavolombelona, araka ny loharanom-baovao.
Nifanaraka ny an-daniny sy ny an-kilany fa atao ny fomba “Fampinomana”. Vory maro ireo mponina hiatrika an’io fomba io saingy voasakana. Nisy fivorian’ny manampahefana tao an-toerana nanapaka ny fanakanana amin’ny fomba rehetra mba tsy hanatanterahana ilay fomba, satria voasokajy ho vono olona an-kitsirano.
Nifanaraka ankolaka anefa ireo mponina sy ireo mpifanolana fa atao any amin’ny ala iray manodidina ny telo kilaometatra miala an’i Vavatenina ilay fomba. Tanteraka tokoa izany ka izao niafara tamin’ny fahafatesan’ireo vehivavy roa nisotro tangena ireo izao, mandra-pahatongan’ireo mpitandro filaminana sy manampahefana. Nosamborina ny lefitry ny lehiben’ny fokontany, ny tangalamena sy ny mpimasy iray. Mitohy ny fanadihadiana.
Fifandraisan’ny miaramila an-dranomasina :: Misy sambo mpiady koreana tonga any Toamasina